Goob-joogeyaashii Caalamka oo ka War-bixiyay Xornimadii ay u Dhacday Doorashadii Madaxtooyada Somaliland | Hangool News
Goob-joogeyaashii Caalamka oo ka War-bixiyay Xornimadii ay u Dhacday Doorashadii Madaxtooyada Somaliland
Hargeysa (Hangoolnews.com)- Goob-joogeyaashii caalamka ka socday ee kor-joogtaynayay doorashadii madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Somaliland ka qabsoontay Isniintii toddobaadkan, ayaa shaaca ka qaaday in doorashadaasi u dhacday si dimuqraadiyad ah oo aad u wanaagsan. Waxaanay dadweynaha Somaliland ugu hambalyeeyeen sida nabadgelyada ahayd ee doorashadu u dhacday.
Goobjoogeyaashan oo tiradoodu ahayd 60 xubnood oo ka kala socday 27 dal, waxay sidaas ku sheegeen shirjaraa’id oo ay xalay fiidkii ku qabteen Huteelka Maansoor ee magaalada Hargeysa, waxaanay ka hadleen daahfurnaantii doorashada, caqabadihii jiray iyo tirada goobaha ay kormeereen.
Waxa kaloo ay shirkaas jaraa’id ka akhriyeen war-murtiyeed dheer oo u qornaa sidan:-
“Iyadoo laga dab qaadanayo doorashada saddexaad ee madaxtooyada oo dhacday 13-ka November 2017-ka, waxa Hargaysa si rasmi ah u soo wada gaadhay 60 xubnood oo ah goob joogeyaasha caalamiga ah oo ay maalgelisay dawladda Ingiriisku, kuwaasoo ka kala yimid 27 waddan.
Waxay imika dhammaystirayaan warbixintii hor-dhaca ahayd oo ay u gudbinayaan guddida doorashooyinka qaranka, iyadoo goob joogeyaashiinna ay Hargaysa ku soo noqonayaan.